Volomboasary fitomboan'ny voa voajanahary voajanahary marika tsy miankina menadia volombava mitombo serum ho an'ny volombava lava sy matanjaka
Fa maninona no misafidy fitomboan'ny volo? Fantatry ny rehetra fa ny manahirana lava sy mahery ary malefaka dia zavatra saro-piaro amin'ny olona rehetra any. Ny fanontaniana tokana dia hoe: "Afaka mampitombo ve ianao?" Ny tovolahy rehetra misy volombava dia mahalala fa ny volombava manify sy tsy misaraka dia tsy fomba hitazomana ny volanao. Ity vokatra ity dia mamaha an'io olana io amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny ady amin'ireo teboka sola mahasosotra eo amin'ny saokanao ireo, ary mitazona ny fitomboan'ny volonao ho matanjaka sy mahitsy. Mahavita inona ny tsiranoka fitomboan'ny volo? Beard Growth Spray dia ahitra ...
Ambongadiny, volom-bolo, fitomboan'ny volom-boaloboka, fitomboan'ny volo ho an'ny volo miverina amin'ny faritra sola
Fa maninona no misafidy fitomboan'ny volo? Ny famoizana volo amin'ny faritra rehetra amin'ny vatanao dia mety hampahory, na fahaverezana tampoka na fahaverezan'ny fotoana. Ny fihenan'ny volo (alopecia) dia mety hisy fiantraikany amin'ny loha fotsiny na amin'ny vatanao iray manontolo, ary mety hihelina na maharitra. Izy io dia mety ho vokatry ny lova, fanovana hormonina, toe-pahasalamana na ampahany amin'ny fahanterana. Na iza na iza dia afaka mamoy volo eo an-dohany, fa mahazatra kokoa amin'ny lehilahy izany. Ny fahasembanana matetika dia manondro fihenan'ny volo be loatra amin'ny hodi-dohanao. Volo nolovaina los ...